Umehluko - Thola ku-Inthanethi
Qondisisa umehluko phakathi kwezinhlobo zepasta.
Thola ku-Inthanethi Januwari 9, 2020 Umehluko Awekho amazwana
Uyini umehluko phakathi kwezinhlobo zepasta? Uhlobo ngalunye lwe-pasta luhluka ngokusebenza kwayo kanye nesimo sayo. I-pasta ende efana ne-spaghetti, ama-noodle noma izinwele zezingelosi; ...
Yini umehluko phakathi kwamagciwane, amagciwane kanye nesikhunta?
Thola ku-Inthanethi Disemba 19, 2019 Umehluko Awekho amazwana
Uyini umehluko phakathi kwamagciwane, amagciwane kanye nesikhunta? Amagciwane njengamanje ukuphela kwezidalwa ezi-acellular emhlabeni. Lokhu kusho ukuthi abakhethi ngisho neseli, bephethe ...
Yini umehluko phakathi kwezinhlobo zikabhiya?
Thola ku-Inthanethi Disemba 17, 2019 Umehluko Awekho amazwana
Uyini umehluko phakathi kwezinhlobo zikabhiya? Izinhlobo zebhiya ziyehluka kuresiphi nenqubo yokuvutshelwa. Kunemindeni emithathu noma izinhlobo zokuvutshelwa:…
Uyini umehluko phakathi kwezinhlobo zama-carbohydrate?
Thola ku-Inthanethi Disemba 16, 2019 Umehluko Awekho amazwana
Uyini umehluko phakathi kwezinhlobo zama-carbohydrate? Izinhlobo ezahlukahlukene zama-carbohydrate ziyahlukahluka ngokuya ngesibalo sekhabhoni ekwakhekeni kwazo. Izinhlobo eziyinhloko zama-carbohydrate yilezi:…
I-Hyperthyroidism ne-hypothyroidism: umehluko
Thola ku-Inthanethi Disemba 10, 2019 Umehluko Awekho amazwana
Uyini umehluko phakathi kwe-hyperthyroidism ne-hypothyroidism? I-Hyperthyroidism yisifo esidala ukukhiqizwa ngokweqile kwama-hormone yi-gland yegilo. I-Hypothyroidism ibangela ukuncipha ...
I-Abiogenesis neBiogeneis - Umehluko
Thola ku-Inthanethi Disemba 6, 2019 Umehluko Awekho amazwana
Uyini umehluko phakathi kwe-abiogenesis ne-biogeneis? I-Abiogeneis, ebizwa nangokuthi isizukulwane esizenzakalelayo, ilandisa ngokubonakala kwezinto eziphilayo ezivela ezintweni ezingaphili. I-Biogenesis isivele ...
Qondisisa umehluko phakathi kokushisa nokushisa.
Thola ku-Inthanethi Disemba 3, 2019 Umehluko Awekho amazwana
Uyini umehluko phakathi kokushisa nokushisa? Ukushisa kwakhiwa ngokuhamba kwamandla phakathi kwemizimba futhi kungalinganiswa kumakhalori (lime) noma ama-joules (j). ...
I-CAPEX ne-OPEX: yiziphi, izinzuzo nezinzuzo
Uyini umehluko phakathi kwe-capex ne-opex? I-CAPEX ne-OPEX yizindlela zokutshala imali ezinkampani. Ngenkathi iCAPEX ibhekelela izindleko ngokutholwa kwezimpahla, i-OPEX ...
Qondisisa umehluko phakathi kwezinhlobo ze-sushi
Uyini umehluko phakathi kwezinhlobo ze-sushi? Izinhlobo ze-sushi ziyehluka ikakhulukazi ngesimo sazo nangezikhundla zezithako. Amagama we-sushi ...
Izinhlobo zomndeni: umehluko
Uyini umehluko phakathi kwezinhlobo zemindeni? Izinhlobo ezahlukahlukene zomndeni zihlobene nokwenza ngokusemthethweni noma hhayi inyunyana yomshado (matrimonial and informal),…